Tatoazy mahafatifaty ho an'ny ambanin'ny nono, inona no dikan'izy ireo? maharary? | Ny fanaovana tatoazy
Susana godoy | | Tatoazy misy endrika, Tattoos on, Tatoazy ho an'ny vehivavy, Karazana tombokavatsa
En Ny fanaovana tatoazy Niresaka imbetsaka izahay momba ireo tombokavatsa izay ampiasain'ny vehivavy ho tia filokana sy manintona kokoa. Ary, tsy misy olona izay eo amin'ny tontolon'ny tombokavatsa afaka mandà fa misy karazana tatoazy izay mety indrindra ho an'ny vehivavy hiseho ho olon-droa. Izany dia noho izany androany, te hiresaka karazana tatoazy mahaliana ho an'ny vehivavy izahay.
Amin'ny lafiny manokana, hiresaka momba ny zava-drehetra mifandraika amin'ny tatoazy ho an'ny vehivavy amin'ny faritra tena akaiky amin'ny vatana isika. Eo ambanin'ny tratra. ny tatoazy ambanin'ny tratra Nahazo laza izy ireo tato anatin'izay taona lasa izay satria fomba lavorary hisehoana manao firaisana ara-nofo sy ara-nofo kokoa. Karazana tatoazy tena akaiky ho an'ny vehivavy manokana nefa tonga miaraka amina fatra feno filan'ny nofo.
Na eo aza izany dia maro amin'ireo vehivavy manapa-kevitra ny hahazo an'ity karazana tatoazy ity no efa tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny kanto ary Manana karazana tatoazy hafa izy ireo. Ary ny tenako dia manome ny marina an'ity fanambarana ity aho satria ny mahazatra dia ny hoe, raha manapa-kevitra ny hanao tatoazy eo ambanin'ny tratrany ny zazavavy iray ary mandehandeha eran'io faritra rehetra amin'ny vatana io dia tsy vao sambany izy tatoazy.
1 Izy io dia faritra mora tohina kokoa amin'ny tatoazy
2 Tsy tokony ho fanelingelenana ny fandehan'ny fotoana
3 Ny dikan'ny tatoazy ambanin'ny tratra
4 Ny fomba sy karazana tatoazy tsara indrindra ho an'ny ambanin'ny tratra
5 Sarin'ny Tatoazy Sexy ho an'ny vehivavy
Izy io dia faritra mora tohina kokoa amin'ny tatoazy
Tsy misy olona afaka mandà fa io faritra amin'ny vatana vehivavy io dia mora tohina. Noho izany, ny mpanakanto tatoazy dia tsy maintsy mihevitra izany rehefa manao tatoazy hisorohana ny fanaintainana be loatra na ny vokatra tsy dia tsara loatra. Ary, raha misy zavatra mampiavaka ireo tatoazy ireo (araka ny efa nolazainay teo aloha), dia manana tsipika madio sy madio izy ireo. Raha tsy izany dia ho very ny vokany ny tombokavatsa.
Ary miresaka ny haavon'ny fanaintainana. Faritra tena maharary ve izany? Avy amin'izay reko, eny. Maharary kokoa noho ny manao tatoazy amin'ny faritra sasany amin'ny vatana, na izany aza, raha raisintsika fa ny ankamaroan'ireo tatoazy ireo dia tsy feno na alokaloka, ny faharetan'ny tatoazy dia tsy ho lava loatra. Noho izany dia afaka milaza isika fa fanaintainana azo zakaina tsy misy olana.
Raha ny fanasitranana ny tatoazy dia tokony hikarakara manokana azy koa isika mba hahazoana antoka fa sitrana ny hoditra ary noho izany dia sorohintsika ny fahaverezan'ny hamafiny na ny fametahana ranomainty be loatra. Na dia mazava ho azy aza, tsy miankina amintsika ihany izany. Na eo aza izany dia mamporisika anao izahay hitandrina tsara rehefa mitsabo ny tatoazy.
Tsy tokony ho fanelingelenana ny fandehan'ny fotoana
Misy ireo mihevitra fa ny tatoazy ambanin'ny tratra dia hevitra ratsy satria, nandritra ny taona maro, dia nihasimba ity faritra misy ny vatan'ny vehivavy ity, ary, tsy te-hiditra amin'ny antsipiriany aho. Fantatsika rehetra ny tiako holazaina. Miharihary fa ity dia tsy tokony ho antony lehibe hanapahana an'ity karazana tatoazy ity na ny hafa. Ary ny hoe, ny tatoazy dia fanapahan-kevitra iray izay tsy maintsy hosaintsainintsika amin'ny fomba lalina ary avelantsika ireo singa madinidinika toy ny fieritreretana izay ho endritsika rehefa antitra isika na amin'ny fomba hijerentsika amin'ny andro mariazintsika.
Noho izany, raha te-hanao tatoazy mahafatifaty ianao eo amin'ilay faritra eo ambanin'ny tratranao, aza hadino ny fijerinao ny endrikao rehefa antitra ianao na amin'ny toe-javatra hafa amin'ny ho avy. Izy io dia faritra akaiky be izay azo afenina tsy misy olana (na amin'ny fahavaratra aza). Avelao hisidina ny eritreritrao ary hijerena fatratra noho io karazana tatoazy io.
Ny dikan'ny tatoazy ambanin'ny tratra
Toa iray amin'ireo safidy tsara indrindra izany tatoazy ambanin'ny tratra. Betsaka ny vehivavy misafidy azy ary tsy gaga izahay. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria miovaova be ihany koa ireo endrika. Afaka miala amin'ny faritra afovoany izy ireo ary mametra ny ampahany amin'ny tratra.
Amin'ny lafiny iray, tsy maintsy lazaina fa ny dikan'ny tatoazy eo ambanin'ny tratra dia mifandraika amin'ny famolavolana mihitsy. Ny foko dia tsy mitovy amin'ny voninkazo. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy hanana ny tandindony ary koa ilay tian'ilay olona omena azy. Na izany aza, tsy maintsy lazaina fa rehefa mieritreritra ny faritra manokana izay hataontsika tombokavatsa, manana ny heviny ihany koa izy io.
Angamba tena hatsarana kely kokoa io saingy tsy azontsika hadino ilay fotoana hiresahana momba ny filan'ny nofo sy ny fanintona. Antony roa matanjaka tokony hanaovantsika endrika toy izany. Ho fanampin'izay, tsy maintsy asongadintsika ny maha-vehivavy. Maro no mihevitra azy ireo ho tatoazy sexiest an'izao tontolo izao. Inona no dikany tsara kokoa ho azy ireo noho io!
Ny fomba sy karazana tatoazy tsara indrindra ho an'ny ambanin'ny tratra
Tonga amin'io teboka io isika, manontany tena momba ny fomba izay ahafahantsika mahazo tatoazy amin'ity karazana ity. Etsy ambany misy feno anao galeria izay hanangonana karazana tombokavatsa isan-karazany ao ambanin'ny tratra. Ny azy dia ny milalao ny endrik'ireo tratra ary mamorona fananganana geometrika mifototra amin'ny tsipika. Afaka mahita tatoazy amin'ny tanan'i Fatima, karandoha na raozy mihitsy aza isika.
Ny safidy hafa mahaliana dia ny fanaovana tatoazy fehezanteny na teny manaraka ny volon-tratra.. Ankoatry ny filalaovana ny volon-tratra dia tsara ihany koa raha ny tatoazy afovoany dia eo anelanelan'ny tratra ihany no anaovana tatoazy ary ny tatoazy dia mivelatra eo ambanin'ny tratra roa. Ny ankamaroany dia tombokavatsa mainty, na dia afaka mahita ny sasany misy antsipirian'ny loko aza isika. Mazava ho azy, araka ny efa nolazainay teo aloha, ny azy dia ny tombokavatsa dia kanto, tsara ary na dia minimalist aza. Amin'izany fomba izany dia afaka milalao ny filan'ny nofo ny vehivavy, amin'ny farany, mampiseho ny maha-lahy sy maha-vavy kokoa noho izay lazaintsika amin'ireo tatoazy ireo.
Lehilahy maro no mahita vehivavy tsy voavaha ny vehivavy manao tombokavatsa ary mazava fa raha mahazo ny karazana tatoazy ianao dia afaka manome isa betsaka. Ary aminao, inona no hevitrao momba ity karazana tatoazy natokana ho an'ny vehivavy ity? Tianay izy ireo.
Sarin'ny Tatoazy Sexy ho an'ny vehivavy
Etsy ambany misy galerianao ohatra amin'ny tatoazy ambanin'ny tratras hanome aingam-panahy anao hanana tatoazy amin'ity karazana ity:
Tatoazy tratra malina - ho an'ny vehivavy ihany!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy ambanin'ny tratra